Sida aan wada ogsoonahay, marmarku waa shey fiican oo darajo ah.Sidaa darteed qoysas badan ayaa u adeegsada marmar qurxinteeda, marmartuna waxay leedahay marmar dabiici ah iyo marmar faux ah.Way aad u badan yihiin. Iyo hadday tahay marmar macmal ah ama marmar dabiici ah waxay leedahay faa iidooyin iyo khasaaro u gaar ah.
Marmar artifishal ah ayaa loo isticmaalaa macadam ka marmar ama dhagax adag si loo buuxiyo walxaha, sibidhka, gesso iyo cusbada polyesterka aan dheregsanayn inay ahaadaan kuwo isku dhegan, laguna sameeyay isku qas, shiid iyo nadiifin.
Marmar dabiici ah waa dhagaxa metamorphic ee lagu sameeyay ficilka heerkulka sare iyo cadaadiska sare ee qolofka. Inta badan wuxuu ka kooban yahay calcite, nuuradda, serpentine iyo dolomite.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada marmar dabiiciga ah iyo marmar macmal ah.
Faa'iidada marmarka dabiiciga ahi waa qaabka qurxinta dabeecadda, dareemiddu way fiican tahay ka dib marka la safeeyo oo adkaanshuhu waa xoog badan yahay. Waxaad rabtaa xirashada-iska caabinta wax ka badan scagliola, ha ka baqin midabaynta. Faa'iido darrada marmarka dabiiciga ah ayaa ah inaysan noqon karin mid aan xaddidneyn oo miraha ku yaal barta kala goynta aan si buuxda loo wada jaan qaadi karin Marmarka dabiiciga waa jaban yahay oo way adagtahay in la hagaajiyo.
Faa'iidada marmar macmal ah waa noocyo kala duwan oo isku xirka ah. Marble isku xirka ma ahan wax iska cad sidaa darteed waxaa jira kalsooni adag .Way ka dabacsan tahay marmarka dabiiciga ah. Marmarka macmalka ah waa walxaha iskudhiska kiimikada, adkeysigiisa waa yar yahay, way fududahay in la xoqdo .